प्रियंका चोपडा यौन उत्पीडनको शिकार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रियंका चोपडा यौन उत्पीडनको शिकार
मुम्बई । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफुलाई यौन शोषण भएको खुलासा गरेकी छन् । बलिवुडबाट हलिवुडमा जमेकी अभिनेत्री प्रियंका अमेरिकाको न्यूयोर्कमा १०औ महिला सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । सो कार्यक्रममा बोल्दै प्रियंकाले आफुले पनि यौन उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘यस्तो लाग्छ की महिलाहरुसँग यौन उत्पीडन शब्द जोडिएर आउछ, अब एकअर्कालाई सपोर्ट गरेका कारण अब हामीलाई कसैले चुप गराउन सक्दैन । यस्तो देखेर निकै हिम्मत आउछ ।’
उनले अगाडी भनिन्, ‘यस कोठमामा शायद एक न एक पटक सबैले यसको सामना गरेको हुनुपर्छ । हामिसँग एक आवाज थियो । तर कसैले हाम्रो सुनेन् । अब अहिले सबैले साथ दिएकाले हामि एक्लै छैनौ र मलाई यो कुरा बताउन मलाई कुनै शर्म छैन ।
#MeTOO अभियान अन्तर्गत विश्वभर यौन शोषणका घटनाहरु बाहिर आएका थिए र अहिलेपनि आइरहेका छन् । बलिवुडमा यसअघि नाना पाटेकर, साजिद खान, आलोकनाथ, विकास बहलजस्ता अभिनेता र निर्देशकलाई यौन शोषणको आरोप लागेको थियो ।